I-Eaton's smart power defense circuit breaker ingeza ukusebenza kumakhasimende e-C & I
I-Eaton's break circuit breaker (eyaziwa nangokuthi i-energy management circuit breaker) yabasebenzisi bokuhlala ikhonjiswe ngokugqamile embukisweni i-International Solar Energy Show walo nyaka. USonnen ukhombise okwephula isekethe okuhlakaniphile kwe-Eaton ngokufaka okunamandla. Idivayisi ikhombise ikhono le-ec ...
Le mimoya engaphansi kwe-radar izokhulisa i-UPS yokusungula
IMotley Fool yasungulwa ngo-1993 ngabazalwane uTom noDavid Gardner. Ngewebhusayithi yethu, ama-podcast, izincwadi, izinhlu zamaphephandaba, izinhlelo zomsakazo kanye nezinsizakalo zokutshala imali ezisezingeni eliphakeme, sisiza izigidi zabantu ukuthi zithole inkululeko yezezimali. I-United Parcel Service (NYSE: UPS) ibinenye ikota esavelele, ...
Njengamanje, ibhethri lamandla we-lithium nebhethri yokugcina i-lithium libaluleke kakhulu embonini.
Njengamanje, ukusetshenziswa kobuchwepheshe be-lithium battery kwisitoreji samandla kugxila kakhulu emikhakheni yokuphakelwa kwamandla kagesi e-grid base station, uhlelo lokugcina izinto ekhaya, izimoto zikagesi neziteshi zokushaja, amathuluzi kagesi, imishini yehhovisi lasekhaya neminye imikhakha. Ngesikhathi se-13th Five Yebo ...
amasu amasha ngokuhlanganyela kanye nokufukulwa kobuchwepheshe bedijithali
Njengamanje, ukuguqulwa kwedijithali sekuyinto evumelana ngamabhizinisi, kepha sibhekene nobuchwepheshe bedijithali obungapheli, indlela yokwenza ubuchwepheshe budlale inzuzo enkulu kakhulu ebhizinisini lebhizinisi yindida nenselelo ebhekene namabhizinisi amaningi. Mayelana nalokhu, ngesikhathi ...
Abstract: ngoFebhuwari 28, 2020, kukhishwe udaba oluthi “sekuyisikhathi sokuqala umzuliswano omusha wokwakhiwa kwengqalasizinda”, oludale ukunakwa okubanzi kanye nengxoxo mayelana “nengqalasizinda entsha” emakethe. Ngemuva kwalokho, izindaba ze-CCTV zifake kuhlu inqwaba yokushaja njengaku ...
I-2020 Middle East Energy Dubai
Isikhathi Sesikhathi: 2020-06-27
I-YUANKY ingelinye lamakhemikhali aphezulu kagesi angama-500 emhlabeni
Ikhaya> Izindaba I-YUANKY ingesinye sezakhi ezihamba phambili zikagesi ezingama-500 emhlabeni Isikhathi Sesikhathi: 2019-11-27 Amafonti: IBigMediumSmall YUANKY ingesinye sezakhi zikagesi ezihamba phambili ezingama-500 emhlabeni. Futhi onguchwepheshe OEM & ODM wesifunda amadlambi iminyaka engaphezu kwengu-20 .YUANKY kuyinto sino-angaphandle ...